Tablelọ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị nrụpụta - China Tablelọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ
TY Igwe anaghị agba nchara Manual Hydraulic Surgery Isiokwu maka Operation Room
TY ntuziaka na-arụ ọrụ dị mma maka ịwa ahụ na ịwa ahụ afọ, ENT, obstetrics na gynecology, urology and orthopedics, wdg.
Eku, kọlụm na isi ya bụ igwe anaghị agba nchara, dị mfe ihicha ma na-eguzogide corrosion.
TS-1 Igwe anaghị agba nchara Mechanical Hydraulic Operating Table for General Surgery
A na-eji tebụl na-arụ ọrụ TS-1 rụọ nke igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike dị elu dị elu, mmebi mmebi ahụ na nhicha dị mfe.
TS Manual Hydraulic Surgical Operation Isiokwu maka Hospital
Okpokoro okpokoro nke hydraulic dị mma maka ịwa ahụ na ịwa ahụ, ENT, obstetrics na gynecology, urology and orthopedics, wdg.
TF Hydraulic na Manual Surgical Gynecology Operation Isiokwu
TF Hydraulic gynecology na-arụ ọrụ na tebụl, ahụ, kọlụm na isi bụ nke igwe anaghị edozi, yana ike dị elu, na-eguzogide corrosion, ma na-enye aka nhicha na disinfection.
Nke a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na eriri ubu, aka, nkwụsị ụkwụ na pedals, basin unyi na strainer, na nyocha nyocha nke gynecological.
FD-G-2 China Electric Medical Delivery Operator maka Obstetrics and Gynecology Department
FD-G-2 vasatail obstetric table na-ejikarị maka ịmụ nwa, nyocha gynecology na ọrụ.
Ahụ, kọlụm na isi nke okpokoro nnyefe eletrik bụ nke igwe anaghị agba nchara 304, nke na-eguzogide corrosion ma dịkwa mfe ihicha.
FD-G-1 Isiokwu Nleba Ahụike Gynecological Gynecological maka Hospitallọ Ọgwụ
FD-G-1 okpokoro ule gynecological na-eji ihe eji eme ihe di elu ma na-eguzogide corrosion, nke na-eme ka nhicha na disinfection nke ụlọ ọgwụ kwa ụbọchị.
TDY-2 Igwe anaghị agba nchara Mobile Electric Electric Medical Operating Isiokwu maka General Surgery
Tebụl na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na TDY-2 nwere akwa akwa na 304 anaghị agba nchara zuru ezu, dị mfe ihicha na mmetọ mmetọ.
E kewara okpokoro tebụl n'ime akụkụ 5: ngalaba isi, ngalaba azụ, ngalaba buttocks, na ngalaba ụkwụ abụọ nwere ike iwepu.
TDY-1 China Electric Medical Operating Isiokwu Price maka Hospital
TDY-1 okpokoro na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ eletrik na-arụ ọrụ iji hụ na ọ nwere ike mezue mgbanwe dị iche iche n'oge ọrụ ahụ, gụnyere ibuli tebụl, na-atụgharị azụ na azụ, na aka ekpe na aka nri, azụ mpịachi na nsụgharị.
TDG-1 Godd Quality Multi-function Electric Operation Table with CE asambodo
TDG-1 Okpokoro na-arụ ọrụ eletrik nwere otu isi ihe ise: elektrik na-agbanwe akwa elu, na-aga n'ihu na azụ azụ, aka ekpe na aka nri, azụ efere azụ, na breeki.
TDY-Y-2 Slọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Electro-Hydraulic Operating Table
E kewara okpokoro a na-arụ ọrụ eletriki-hydraulic n'ime akụkụ 5: ngalaba isi, ngalaba azụ, ngalaba akụkụ, akụkụ ụkwụ abụọ na-ekewapụ.
Ihe ọkụ ọkụ na-ebufe ọkụ na-agbakwunye ihe 340mm na-agbatị na-egosi na ọ dịghị ebe ọhụụ n'oge nyocha X-ray.
TDY-Y-1 Multi-nzube Electric-Hydraulic Medical Isiokwu Isiokwu na China
TDY-Y-1electric hydraulic na-arụ ọrụ na tebụl na-anabata usoro nnyefe eletriki eletrik, nke na-anọchi teknụzụ ọkụ eletrik na-ebufe.
The ọnọdụ ukpụhọde bụ ihe ziri ezi, ije ọsọ bụ ihe edo na ike, na arụmọrụ bụ a pụrụ ịdabere na inogide.
TDY-G-1 Radiolucent Stainless Steel Electric Electric-Hydraulic OR Isiokwu maka Neurosurgery
TDY-G-1 electro-hydraulic jikọtara tebụl na-arụ ọrụ, yana ọnọdụ dị oke ala, ọkachasị maka ịwa ahụ ụbụrụ. Ọ dịkwa mma maka ịwa ahụ afọ, obstetrics, gynecology, ENT, urology, anorectal na ọtụtụ ụdị ịwa ahụ ọzọ.